Other News | Artist Khabar | Page 7
Other News	‘महाभुकम्प २०७२ गीति बृतचित्र’ उपराष्ट्र पति पुनद्धारा बिमोचन	माघ, काठमाडौं । गएको बि.स. २०७२ सालको बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पको गिती बृतचित्र बिमोचन गरीएको छ । ओम बहादुर जिसीले लेखन तथा निर्माण गरेको बृतचित्र मंगलबार उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले एक कार्यक्रमका बिच बिमोचन गरेका हुन् ।
उक्त गिती बृतचित्रको भिडियोलाई रेशम सापकोटाले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियो ७२ मिनेटको रहेको छ । कार्यक्रमका..	यतिसम्म हुन्छ हेर्नुस्, शाहरुखलाई हेर्न जाँदा भिडमा च्यापिएर एकको मृत्यु	माघ, काठमाडौं । बलिउडका स्टार शाहरुख खान भन्ने बित्तिकै सायदै उनलाई मन नपराउने कमै होलान् । उनी जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ उनका फ्यानहरुको यति ओईरो लाग्छ कि नियन्त्रण गर्नै सकिदैन ।
यस्तै शाहरुखखान पछिल्लो समय उनको चलचित्र ‘रईस’को प्रमोशनमा दौडिरहेका छन् । यसैबिच बिभिन्न ठाउँमा प्रमोशनका लागी हिडिरहँदा उनका फ्यानहरु पनि उनलाई हेर्न..	म्यूजिक भिडियोको सुटिङमा प्रयोग भएको गोली लागी कलाकारको मृत्यु	माघ, एजेन्सी । एक म्यूजिक भिडियोको सुटिङका लागी प्रयोग भएको गोली लागेर कलाकारको मृत्यु भएको छ । अष्ट्रेलियाको व्रिसवेन शहरमा छायांकन भइरहेको एक म्युजीक भिडियोको सिनको लागी चलाइएको गोली लाग्दा २० वर्षिय पुरूष कलाकारको मृत्यु भएको बिबिसीले समाचार लेखेको छ ।
मृत्यु हुने कलाकारको छातीमा गोली लागेको थियो भने प्रहरीका जनाए अनुसार सुटिङमा..	जिग्री पाँडेले सप्तरीका दृष्टिविहीनका लागि बनाईदिने घरका लागी सहयोग जुट्दै	माघ, सप्तरी । हाँस्यकलाकार जोडी कुमार कट्टेल (जिग्री) र अर्जुन घिमिरे (पाँडे) पनि यतिखेर समाज सेवामा लागेका छन् । कलाकारहरुले पनि समाज परिवर्तनका लागी केहि गर्न सक्छन् भन्ने भावना अनुरुप यो जोडी यतिखेर सप्तरी जिल्ला पुगेको छ । कलाकारद्धय जिग्री र पाँडेले सप्तरीको एक दलित बस्तीमा दृष्टिविहीनका लागि घर बनाउने अभियान शुरु गरेको हो..	‘बस्यौ किन मनभित्र’ म्युजीक भिडियो छिट्टै बजारमा आउँदै	माघ, काठमाडौं । ‘बस्यौ किन मनभित्र मुटु चुँडाई लानेभए, किन जोड्यौ झुठो नाता आखिर टुटाई जानेभए ।’ यस्तै कर्णप्रिय शब्दहरुले भरिएर एक आधुनिक गीत केहिदिनमै बजारमा आउने भएको छ । गीतको भिडियोको छायांकन सकिएको निर्माण युनिटले जनाएको छ भने भिडियो यसैसाता बजारमा आउने छ ।
ईन्द्र बुढाथोकीको रचनामा तयार भएको यस गीतलाई शनम पुरुषले संगीत भरेका छन्..	मुसहर बस्ती निर्माणका लागी अस्ट्रेलियाबाट धुर्मुस सुन्तलीलाई १७ लाख सहयोग	माघ, काठमाडौं । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनद्धारा महोत्तरीको बर्दिवासमा निर्माण भइरहेको एकिकृत मुसहर बस्ती निर्माणका लागी अस्ट्रेलियाबाट १७ लाख भन्दा बढी सहयोग मिलेको छ । यो सहयोग रकम अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा भएको गज्जबको इभेट्न नामक कार्यक्रमले मिलाइदिएको हो ।
केहि दिन अघिमात्र आर्टिस्ट सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुन्जना घिमिरे..	गायक मिलन लामाले शुरु गरे उदाहरणीय कामः ‘बनको काफल बनकै चरीलाई’	माघ, पाल्पा । गायक मिलन लामा भन्ने बित्तिकै हामी केहि गीतहरु झल्यास्स सम्झन्छौं । 'माझि दाई पोखरा फेवा तालको', 'जुम्ला कालिकोटको' लगायतका गीतहरु एकसमय निकै चलेका गीत हुन् । त्यसोत यी गीतहरु अहिले पनि ठाउँठाउँमा गुन्जिरहेका हुन्छन् ।
यीनै गीतका गायक मिलन लामाले लामोसमय देखी बिभिन्न सामाजिक कार्यमा हात हाल्दै आएका छन् । नेपाल र नेपालीका..	दिपिकाले गरीन् हलिउड चलचित्र ‘ट्रिपल एक्स’को प्रमोशन, गोल्डेन गाउनमा सेक्सी अवतार (३० तस्बिर)	पुस, एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणले बिहिबार आफ्नो पहिलो हलिउड चलचित्रको प्रमोशन गरेकी छिन् । चलचित्र 'ट्रिपल एक्सः रिटर्न ऑफ द जेंडर केज'को हलिउड अभिनेता विन डीजल सँग मिलेर प्रमोश गरेकी हुन् ।
दिपिकाले चलचित्र प्रमोशनका लागी गोल्डेन गाउन लगाएकी थिइन् । जसमा उनी सेक्सी देखिएकी थिइन् । हेरौं प्रमोशनका ३० तस्बिरहरु ।
..	शंकर बिसि र पार्वती राईको नृत्यमा ‘सालघारीमा सिसौ’ (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । नेपाली लोकगीत क्षेत्रको गीतको भिडियोमा दर्शक माझ निकै रुचाइएको जोडी हो शंकर बिसी र पार्वती राई । एक समय हरेक लोकदोहोरी गीतहरुमा यो जोडी खुबै देखिन्थ्यो र केहि समयको मनमुटाव पछि यो जोडी सेलाएको पनि थियो र पछिल्लो केहि समययता पुनः यो जोडीलाई म्युजीक भिडियोहरुमा दर्शकले देख्न पाएका छन् ।
यस्तैक्रममा भर्खर मात्र सार्वजनिक..	आफ्नी श्रीमतीको नग्न फोटो सेयर गरे यी नायकले	पुस, काठमाडौं । बलिउड तथा हलिउडमा समय समयमा अचम्मका समाचारहरु बाहिर आईरहेका हुन्छन् । अझ बलिउड भन्दा हलिउडमा यस्ताकुराहरु सुनिरहेको हुुन्छौं। यस्तै अहिले पनि हलिउडका एक नायकले आफ्नी श्रीमतीको नग्न तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरीदिएका छन् ।
नायक च्यानिंग ट्याटमले आफ्नी श्रीमती जेना डेवनको श्यामश्वेत नग्न फोटो इन्स्टाग्राममा पोष्ट..	Pages:«12345678910...47»